Milatariga Mareykanka oo iibsaday xogta Apps Muslimiinta ku badan tahay
Ciidanka Mareykanka oo iibsaday xogta apps Muslimiinta adeegsato
Taliska Howlgaladda Gaarka Ah xaqiijiyey in ay gateen macluumaadka goobaha ay dadku joogaan.
WASHINGTON, US – Milatariga Mareykanka ayaa iibsaday qeybta lagu keydiyo macluumaadka goobaha ay dadka joogaan ee application-no ay ku badan yihiin Muslimiinta, sidda ay kashiftey warbixin cusub.
Jariiradda Motherboard ee reer Ameerika ayaa warisay in ay arrintaan ku xaqiijisay baaritaan ku saleysan su'aallo waydiin ah, codad dadweyne iyo wareysiyo lala yeeshay qaar kamid ah dadka soo saarey apps-kaas.
App-ka ugu caansan ee ciidamadda Mareykanka beegsadeen ayaa ah Muslim Pro kaasoo ka caawiya Muslimiinta Aadaanka, Waqtiga iyo Qiblada Salaada. Sidoo kale, waxaa laga dhageysan karaa Qur'aanka Kariimka.
Sidda ay muujineyso xog-uruurin ay sameysay majaladda afka dheer, app-kaan waxaa guud ahaan caalamka la degsaday 98 milyan jeer.
Intaas waxaa wehliya apps kale kuwaasoo Muslimiinta u adeegsadaan haasaawaha iyo in ay kula socdaan xogta duufaanadda.
Afhayeen u hadlay Taliska Howlgalada Gaarka ee Ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in talaabadan ay qeyb ka tahay siyaasadooda ku aadan dabagalka iyo ka hortagida khataraha kaga soo fool leh dhanka argagixisada.
Tan iyo markii uu dhacay weerarkii daaraha mataanaha, Mareykanka ayaa hormuud ka ah la dagaalanka kooxaha argagixisada kuwaasoo ay ugu waaweyn yihiin shabakadda Al-Qaacida iyo maleyshiyadda Daacish.
Joe Biden oo si kulul uga hadlay diidmada Donald Trump ee guushiisa
Caalamka 11.11.2020. 06:33
Madaxweynaha la doortey ayaa rajeeyay in aysan talaabadan yeelan "cawaaqib weyn".
Muwaadin Ameerikaan ah oo laga soo furtay dabley afduubatay
Caalamka 31.10.2020. 21:00
Ciddii jabsatay baraha Twitter-ka ee madaxda Mareykanka oo la shaaciyey
Caalamka 19.07.2020. 14:40
Muwaadin Mareykan ah oo 16-sano oo xabsi ah loogu xukumay basaasnimo
Caalamka 15.06.2020. 11:50
WHO oo joojisay tijaabada daawo uu Trump u isticmaalay Covid-19
Caalamka 26.05.2020. 07:00